TOMATO "KING PINK": SHARAXAADDA KALA DUWAN, SIFOOYINKA, SAWIRADA - BEER CAGAARAN
Markii hore, duurka, yaanyada waxay ahaayeen kuwo casaan ah oo aan lahayn sifooyin aad u sarreeya. Marka khudradda cajiibka ah ee laga heley ay soo saartey jilayaal, noocyo badan oo kala duwan oo kala duwan ayaa u muuqday, midba midka kale ee dhadhanka, qaabka, cabbirka iyo midabka.
Inkasta oo inta badan inta badan miro ayaa weli casaan, noocyo casaan waa kuwo aad u caan ah ee beerta. Waxay u badan yihiin kuwo waaweyn oo aad u dhadhan fiican leh, iyada oo aan lahayn jimicsi, loogu talagalay cunista cuntada.
Caadi ahaan ma ahan kuwo la qaado, laakiin noocyo kala duwan oo yaanyo ah "Pink Tsar" waxay u dulqaadan karaan safar dheer oo aan luminin bandhigga, ama waqti yar oo lagu kaydiyo dambiilaha beerta.
Tamaandhada "King Pink": sharaxaadda noocyada kala duwan
"Pink Tsar" waa noocyo kala duwan oo casaan ah oo yaanyo ah, asalkiisu waa shirkadda Zedek. Yaanyo noocan oo kale ah ma aha oo keliya qaabka cayriin, laakiin sidoo kale diyaarinta kala duwan ee xilliga qaboobaha, casiir yaanyo waxay noqon doontaa gaar ahaan dhadhan fiican leh..
Tamaandhada "King Pink" - wakiil ka ah noocyo xilli-dhexaad ah, ninkii beerta ka shaqaynayay wuxuu sugi doonaa in goosashada laga bilaabo 100 illaa 112 maalmood. Tirinta waa in la bilaabo laga bilaabo maalinta dhalashada koowaad, oo aan ka hor muuqaalka miraha, laakiin ka hor koritaanka iyo ku haboonaanta isticmaalka.
Miraha waa midab qurux badan oo jilicsan.
Xajmigu waa mid cajiib ah, xaaladaha wanaagsan miisaanka hal yaanyo waxay gaari karaan ilaa 300 garaam.
Jidhku waa mid qaro weyn, oo casiir leh.
Dhadhanka waa wax yar oo macaan, oo ku haboon salad aan lahayn wax lagu daro.
Qaabka miro ayaa ku wareegsan, wax yar ka yar.
Maqaarku waa siman yahay.
Marka xigta waxaad arki doontaa sawir ah noocyo yaanyo ah "King Pink":
Dhirta lafteeda waa mid aan cadeyn, ballaaran, dhererka bir baadiyaha wuxuu gaari karaa 1.8 mitir markii lagu koriyo koriyo iyo 1.5 mitir dhulka hoostiisa. Sababtoo ah miisaankooda, waa inay duurka u xidhmaan. Haddii uu leeyahay kulayl ku filan, iftiin, biyo iyo bacriminta (waa suurad wacan in la quudiyo wax yar), ka dibna dhaliddu waxay noqon doontaa mid sare oo way fiicnaan doontaa ninkii beerta ka shaqaynayay.
Gadashada abuurka iyo geedo sii kordhaya maaha mid adag, sababtoo ah kala duwanaanshahan waa mid caan ah.
Of cayayaanka ayaa weerari kara baradho duqsiyo Colorado, laakiin kaliya on dhirta dhalinyarada, dadka waaweyn ayaa waxaa saameeyeen xajmiga this aad u dhif ah. Way fududahay in laga takhaluso, marka ay u muuqato tiro badan - qashin, iyo haddii ay jiraan dad yar - waxaad si fudud uga soo qaadi kartaa duurka oo iyaga ku burburin kartaa.
Xasuusashada cudurrada, waxaa habboon in la ogaado in Pink Tsar uu iska caabbiyo verticillus, laakiin cudurrada kale, sida dabaylo goor dambe ah, yaanyada waa in laga baaraandegaa ka hortagga cudurrada.